मोबाइल एपले बाख्रा बिक्री बढायो, एक वर्षमा एक करोड बढीको काराेबार – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > मोबाइल एपले बाख्रा बिक्री बढायो, एक वर्षमा एक करोड बढीको काराेबार
मोबाइल एपले बाख्रा बिक्री बढायो, एक वर्षमा एक करोड बढीको काराेबार
पोष्ट गरिएको असार. १८, २०७८ मा २:३० मध्यान्ह असार १८, २०७८
काठमाडाैं । कृषि पथ मोबाइल एप सञ्चालन भएपछि जननी समाजिक उद्यामी महिला सहकारी सस्थाले यो आर्थिक बर्षमा करिब १ करोड बराबरको बाख्रा बिक्रि वितरण गरेको छ । पहिला व्यपारीहरुलाई सम्पर्क गर्दा बिचौलियाहरुले नाफा खाइदिने र समयमा बाख्रा बिक्रि गर्न नसक्दा किसानहरु घाटा व्यहोर्न बाध्य थिए ।
बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाँउपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा वन जंगल छ । घर छेउ वरिपरि जंगल भएको कारणले राप्ती सोनारी गाँउपालिका २ का किसानहरु बाख्रा पालन तर्फ आकर्षित भएका छन् । बाख्रा पालन गर्नका लागि गाँउमै रहेको जननी समाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले बिक्रि वितरण तथा बाख्राहरुलाई चाहिने दाना उपलब्ध गराउदै आइरहेको छ ।
सहकारीका सबै सदस्यहरुले बाख्रा पालन गरेर अम्दानी गरिरहेका छन् । पहिला किसानहरुले सहकारीलाई र सहकारीले व्यापारीहरुलाई बिक्रि गर्दा बिचौलियाले नाफा खाइदिने र बिक्रि हुन धेरै समय लाग्दा किसानहरुले घाटा व्यहोर्न परेको थियो । तर नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँके शाखाले गएको बर्ष देखि केयर कृषि पथ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएपछि किसानहरुलाई मात्र नभएर सहकारीहरलाई पनि सहज भएको जनाईएको छ ।
कम समयमा बिक्री हुने र बिचौलियाहरु पस्न नपाउने भएपछि संस्थाले एपको माध्यमबाट १ करोड बराबरको बाख्रा बिक्रि गरेको सहरकारीका अध्यक्ष गणेश खत्रीले जानकारी दिए ।
जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लि. राप्ती सोनारी २ बाँके गाँउका मानिसहरुले बाख्रा पालनबाट राम्रो अम्दानी गर्न थालेपछि विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकी दिल कुमारी शर्माले बाख्रा पालन शुरु गरेकि छिन् ।
दिल कुमारी सँग अहिले एउटा बोयर बोका र स्थानीय जातका ३० बढी बाख्रा पाठापाठि छन् । गाँउको सहकारीले बाख्रा पालनमा सहयोग गर्ने भएपछि अहिले उनी आधुनिक तरिकाको बाख्रा र खोर निर्माणमा लगानी गरेको बताईन ।
राप्ती सोनारीका धेरै सहकारी संस्थाहरुले कृषकहरुसँग साझेदारी गरेर काम गरि रहेका छन् । किसानहरुले उत्पादन गरेका खद्यान्न तथा बाख्रा, कुखुुरा लगातका उपजहरु खरिद बिक्रि तथा वितरण गरिरहेका छन् ।